गाउँमा उस्तै समस्या : कतै पानी छैन, कतै मल छैन – Rajmarg Online
गाउँमा उस्तै समस्या : कतै पानी छैन, कतै मल छैन
दाङ, जेठ १३ । दाङको घोराही उपमहानगरकै बासिन्दाहरुले खोलाको पानी पिउन बाध्य भएका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ भैसकुरका स्थानीयबासीहरुले बबई र कटुवा खोलाको प्रदुषित पानी पिउन बाध्य भएको बताएका छन् ।
गाउँमा भएका सम्पुर्ण कुवा, ईनारहरु सुकेका छन्, भने शुद्ध पिउने पानीको लागि धारा सञ्चालन हुन नसकेको छैन । कुवाको भरमा बाँचेका भैसकुरका स्थानीयबासीहरु खडेरीको मौसमसँगै पानीको अभाबमा पिरोलिनुपर्ने बाध्यतामा बाँचिरहेको शान्ता घिमिरेले बताउनुभयो । ‘हाम्रो पानीको स्रोत भनेको कुवाको पानी हो, खडेरी लागेपछि सुक्छ, त्यसपछि बबई खोलामा गएर जरुवा बनाएका पानी ल्याउनु पर्छ ।’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक वर्ष हामीहरु पिउने पानीको अभावमा बाँच्न बाध्य छौँ ।’ चैत्र महिना सुरु भएपछि साउन महिनासम्म पिउने पानीको समस्या हुने उहाँको भनाई छ ।
एकातिर पिउने पानीको समस्या भोगीरहेका स्थानीयहरु छन् भने खेतिपातीको समय आईपुग्दा पनि कृषकहरुले मल प्राप्त गर्न नसक्नु अर्को समस्या छ । यो समय कृषकहरुले सरकारबाट अनुदानमा मल प्राप्त गर्नुपर्ने भएपनि दाङमा मलको समस्या रहेको छ । अनुदानको मल सहकारी मार्फत कृषकको हातमा पु¥याउने नीति बनाएको छ, तर सहकारीहरु कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट्र टेनिङमा मलको अभाव रहेको बताउँदै आएका छन् । उज्यालो कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक लौटन चौधरीले कृषकहरुबाट मलको माग हुँदै आएपनि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट्र टेनिङमा मलको अभाव रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकारको विषयमा घोराहीमा भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कर्मचारी र औषधीको अभाव, विद्यालयहरुमा दरबन्दी र भौतिक पुर्वाधारहरुको अभाव रहेको सहभागीहरुले बताएका थिए । मावि झिङ्नी बन्जाडी, मावि रावत गाउँ लगाएतका विद्यालयहरुमा लामो समय देखि मावि तहमा सञ्चालन भएपनि दरबन्दीको अभाव रहेको शिक्षकहरुले बताउनुभयो । कक्षा कोठाको अपुग, विद्युतको समस्याले कम्प्युटर कक्षा सञ्चालनमा कठिनाई, खेलकुदका सामग्रीहरुको अभाव, विज्ञान प्रयोगशाला नहुनु, पुस्तकालयमा कर्मचारी र पुस्तकको अभाव लगाएतका विषयमा विद्यार्थीहरुले समेत गुनासो गरेका थिए ।
यस्तै स्वास्थ्य तर्फ बर्थिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नसकेको सेवाग्राही जुना चौधरीले बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेक दाङले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा शिक्षा महाशाखाका विनोद गौतमले सिमित स्रोत साधनबाट काम गर्नु पर्ने अहिले पनि बाध्यता रहेको र शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यक्रम मार्फत शिक्ष परिपुर्तिको व्यवस्था मिलाईने बताउनुभयो ।
यस्तै स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तिले यो वर्ष बजेट घटेर १० लाख रुपैँया मात्र आएका कारण औषधीको अभाव हुन गएको बताउनु भएको छ । साथै उहाँले उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १, ३ र ८ मा स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य जारी रहेको र अन्य वडाहरुमा वडा स्वास्थ्य केन्द्रहरु सञ्चालनमा आईसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाको उपमेयर सीता सिग्देल न्यौपानेले विकासको गति सुरु भैसकेका कारण विस्तारै समस्याहरु समाधान हुने जाने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक परिवर्तन निक्कै गाह्रो विषय भएको भन्दै भौतिक संरचनाहरुको निर्माणले मात्र विकास नहुने भएकाले मानिसको सोँचको विकास पनि अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।
मानव अधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्त र विभिन्न वडा अध्यक्षहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण ईन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरले गर्नुभएको थियो ।